महोत्सवमा कुल २५ वटा लामा र छोटा चलचित्र, वृत्तचित्र एवं कार्टुन फिल्म देखाइएको छ, जसमा नेपालबाट १३ वटा वृत्तचित्र रहेका छन् ।
१७ कार्तिक २०७६ आइतबार
प्राचीन इजिप्टका राजा उर्फ फारोह थिए, टुटानखामुन । १८ औँ शताब्दीका अन्तिम फारोह टुटानखामुन ९ वर्षकै उमेरमा राजा भए । १९ वर्षको उमेरमै धरतीबाट बिदा भए । सन् १९२२ मा मम्मी बनाएको उनको चिहान होवार्ड कार्टरले पत्ता लगाएपछि सारा विश्वले उनीबारे थाहा पायो ।
नेपाली इतिहास हेर्दा प्राचीन समयदेखि अन्तिम शाहवंशको शासनकाल नियाल्दा हत्या हिंसा र धोका सत्ता र राजनीतिको अभिन्न पाटो रहेको छ । तर टुटानखामुनका जीवनी पढ्दा उनका पुर्खा सबै कालगतिले मरेका छन् । टुटानखामुनको अल्पायुको मृत्युको कारण भने रहस्यमयी छ । अफ्रिकी मुलुक इजिप्टको यो कहानी टुटानखामुन यसै साता पर्दामा देखाइएको छ । भोक, रोग र गरिबी मात्र भनेर चिनाइने अफ्रिकाको यति समृद्ध इतिहास नेपालीले कहिले चिन्ने ?
कुनै पनि देश, क्षेत्र, वर्ग विशेषबारे बुझ्न त्यसबारे प्रस्तुत न्यारेटिभले ठूलो भूमिका खेल्छ । जस्तो विश्वले अफ्रिकी महादेश भन्नेबित्तिकै अन्धकारको महादेश, गरिबी र भ्रष्टाचार भनेर बुझ्छन् तर के अफ्रिका त्यो मात्रै हो त ? अफ्रिकालाई अफ्रिकीको आँखाबाट हेर्न जरुरी छ । यही उद्देश्यका साथ ‘नेपाल अफ्रिका चलचित्र महोत्सव’ भइरहेको छ ।
आठौँ संस्करणको महोत्सव 'कलेज अफ जर्नालिज्म एन्ड मास कम्युनिकेसन' ले जमलस्थित नाचघरमा आयोजना गरेको हो । कलेजकी अध्यक्ष मञ्जु मिश्र अफ्रिकालाई लिएर बनेका नेपाली न्यारेटिभ तोड्न महोत्सव आयोजना गरेको सुनाउँछिन् । भन्छिन्, “प्राकृतिक सम्पदाका लागि अफ्रिका धनी छ, नेपालभन्दा कयौँ विकसित देश छन् अफ्रिकामा । त्यो बुझ्नु जरुरी छ ।”
सन् २०११ देखि महोत्सव आयोजना हुँदै आएको छ । अफ्रिकी महादेशमा ५४ राष्ट्र छन् तर नेपालको इजिप्टसँग मात्र दौत्य सम्बन्ध छ । मिश्रका अनुसार अफ्रिकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठूलठूला विश्वविद्यालय छन् तर तिनको बारेमा नेपाली विद्यार्थी अनभिज्ञ छन् । २०/२५ हजारका लागि नेपाली खाडी मुलुकमा काम गर्न जान्छन् जबकि अफ्रिकी मुलुकमा रोजगारीका लागि राम्रा अवसर छन् । भन्छिन्, ”अफ्रिकी समाज पनि नेपालजस्तै छ । यहाँ जस्तै त्यहाँ पनि गरिबी छ । प्राकृतिक स्रोत साधन छ, नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरु छन् । नेपालमा जस्तै लैंगिक विभेद छ ।”
महोत्सवमा कुल २५ वटा लामा र छोटा चलचित्र, वृत्तचित्र एवं कार्टुन फिल्म देखाइएको छ, जसमा नेपालबाट १३ वटा वृत्तचित्र रहेका छन् । यसपटक नाइजेरिया, केन्या, घाना, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बावे, सेनेगल, मालवी, इजिप्ट, चीन र बेलायतलगायत देशका सिनेमा छन् ।
महोत्सवमा नेपालबाट निमबहादुर बस्नेत निर्देशित हलो, गणेशजंग रावल निर्देशित भोक, भीमलाल श्रेष्ठ निर्देशित मकै विवाह र नेपाल पर्यटन बोर्डको नेपाल ल्यान्ड अफ डाइभर्सिटीजस्ता वृत्तचित्र पनि देखाइएको थियो । अफ्रिकाको भने क्रान्ति, इतिहासको गाथा, त्यहाँको जीवनशैली, संघर्षको कथायुक्त चलचित्र देखाइएको छ ।